Vao namboly - Church of God Switzerland of the World
lahatsoratra > Day-by-Day > Neugepflanzt
“Tahaka ny hazo vao ambolena eo amoron’ny rano velona izy, izay mamoa amin’ny fotoany, ary tsy malazo ny raviny.” ( Salamo 1:3 ).
Indraindray ny tanimboly dia mametraka zavamaniry ao anaty toerana tsara kokoa. Rehefa ao anaty fitoeran-javatra dia afaka mifindra mora foana izy mba hahazoana masoandro sy alokaloka bebe kokoa, na inona na inona ilain'ny zavamaniry. Angamba kosa hamboly tanteraka ilay zavamaniry ary hamindra any amin'ny toerana ahafahany mivoatra tsara kokoa.
Ny ankamaroan'ny fandikana ny Salamo 1: 3 dia mampiasa ny teny hoe "nambolena". Ilay teny "nambolena vaovao" anefa dia ampiasaina ao amin'ny Baiboly anglisy mahazatra. Ny hevitra dia hoe izay mankafy ny torolalan'Andriamanitra dia mihetsika ho vondrona na tsirairay toy ny hazo novolavolaina. Ny fandikan-teny anglisy "Ny Hafatra" dia mamaritra izany toy izao: "Hazo vao nambolena tao Edena izy ireo, izay mamoa voa isam-bolana, izay ny raviny dia tsy malazo ary mamony foana".
Ao amin'ny lahatsoratra hebreo tany am-boalohany dia misy ny matoanteny «schatal», izay midika hoe «mampiditra», «mamindra». Izany hoe, miala amin'ilay toerana nialany tany amin'ny toerana vaovao ny hazo ka mamelana sy mamoa hatrany. Tonga ao an-tsaina izay nolazain'i Kristy ao amin'ny Jaona 15:16: "Tsy nifidy ahy ianareo, fa Izaho no nifidy anao ary nanapa-kevitra anao handeha sy hamoa ary mijanona ho vokarinao."
Mahavariana ny mifanitsy. Jesosy nifidy antsika hahavokatra. Tsy maintsy nohetsehin’ny fanahy anefa izahay, mba hitomboanay. Noraisin’i Paoly io hevitra io tamin’ny fanazavana fa mamoa voa ny mpino satria miaina sy mandeha ao amin’ny Fanahy izay iorenany. “Tahaka ny nandraisanareo an’i Kristy Jesosy Tompo ankehitriny, ka mandehana ao aminy, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy, ary mafy orina amin’ny finoana, araka ny nampianarina anareo, ka be dia be amin’ny fisaorana.” ( Kolosiana 2:7 ).
Misaotra anao ry Dada, noho ny nandehanany anay hatrany am-boalohany ho amin'ny fiainana vaovao, miorina mafy amin'i Jesôsy ary miadana ao aminy, mivavaka amin'ny anarany izahay. Amen.